Selva de Oza, natiora sy fizahantany | Vaovao momba ny dia
Manohy ny drafitray izahay fizahan-tany any ivelany, ambanin'ny lanitra, mifandray amin'ny natiora sy eo an-tendrombohitra. Anio dia anjaran'ny Ala any Oza, habaka iray izay misy ao anatin'ny Valan-javaboary voajanaharin'i La Jacetania Andrefana.
Toerana mahafinaritra tokony hatao fitsangantsanganana, fiakarana, fitsangantsanganana na fanaovana ski amin'ny ririnina ho avy. Ary ahoana? Andao hianatra bebe kokoa momba ny Selva de Oza.
Selva de Oza sy La Jacetania
La Jacetania dia ao Aragon, eo anelanelan'ny Zaragoza sy Huesca, any Espana. Ny Atlantika Pyrenees no sisin-tany voajanahary miaraka amin'i Frantsa ary ny tampony avo indrindra eto dia 2886 metatra ny haavony, noho izany, mamiratra ny ski ary hitantsika ny iray amin'ireo toeram-pitsangatsanganana tranainy indrindra any Espana, na tsy ilay tranainy indrindra.
Ny valan-javaboary voajanahary amin'ny lohasaha andrefan'ny La Jacetania dia naorina tamin'ny Desambra 2006 ary araka ny efa nolazainay tany am-piandohana, ao anatiny no misy ny Selva de Oza. Raha ny marina dia mendrika hotsidihina ny faritra iray manontolo satria manintona. Azonao atao ny mikendry ny hahafantatra ny tanànan'i Hecho, Siresa ary ny monasiterany ary manomboka eo dia manomboka miditra ao amin'ny Selva de Oza ianao, eo anelanelan'ny tendrombohitra sy ny ala mikitroka kokoa.
Raha mandeha fiara ianao dia azonao atao ny mametraka azy io na aiza na aiza toerana fijanonana telo inona no eo ary avy eo jereo izay karazana fitsangatsanganana Azonao atao izany araka ny toetrandro manjaka amin'ny fitsidihanao. Ny iray, ny voalohany, dia ao amin'ny Ivotoerana Interpretation Megalithic Pyrenean, ny faharoa dia ao amin'ny tobin'i Ramiro el Monje ary ny farany dia eo amin'ny lalan'i Guarriza.
Ao amin'ireo tranonkala telo ireo afaka misafidy amin'ny làlana maromaro ianao. Ohatra, amin'ny voalohany, iray amin'ireo zotra atoro anao no manaraka ilay làlana romana taloha izay mamakivaky ny lohasahan'i Boca del Infierno, lohasaha tsara tarehy. Ny làlana mihitsy dia miendrika faribolana ary manodidina ny roa ambin'ny folo kilometatra ny fitambarany.
Raha ny fiantsonana faharoa dia azonao atao ny manaraka ny Làlana Peña Forcá sy Estribiella izay mitambatra ho ala kely, beech ary cemara. Ilaina ny mianika kely, sahabo ho roa kilometatra, satria tonga amin'ny ahitra mahafinaritra ianao miaraka amin'ny fahitana tsara ny massif rincón de Alanao sy Peña Forcá.
Ary farany, raha manapa-kevitra ny handeha amin'ny toerana fijanonana farany ianao dia afaka mandray lalana roa, ny iray eo ankavanana ary ny iray eo ankavia.
Raha mandray ny iray amin'ny ankavanana ianao dia hahatratra ny lalana mankany Lohasaha Aguas Tuertas sy Ibbon de Estanés, manana kilometatra kely sy sasany mahery kely. Manana telo kilometatra voalohany somary tsotra ianao ary aorian'ny Valle de Aguas Tuertas, raha manaraka dimy kilometatra hafa ianao ary miampita azy dia ho tonga any Ibon de Estanés ianao. Raha mandray ny iray amin'ny ankavia ianao dia misy lalana miakatra dimy kilometatra miakatra izay mahitsy mankany Ibon.
Ny faritra iray manontolo dia a toerana manokana ho an'ny mpihanika fa raha ny tena izy raha tsy izany dia afaka miala voly ihany koa ianao. Ohatra, misy ny Ala Oza ary ny azy ireo tsipika zip sy lalao mifandanja. Eo afovoan'ny ala mikitroka sy kesika ary hazo cemara no misy azy ary tsy misy lalana iray akory fa valo misy fahasahiranana samy hafa, miaraka amin'ny renirano avokoa. Ary misy ho an'ny ankizy, miaraka amin'ny jumpers, tsipika fandefasana zip manokana sy lalao hafa, ary ho an'ny olon-dehibe na ankizy mihoatra ny sivy taona miaraka amin'ny sehatra avo lenta, zipa lava, rabosa, splinter ary paniquesa manana haavo samy hafa.
Tadidio fa manodidina eto izao ny tampon'isa dia mihoatra ny roa arivo metatra ny haavony ary eo amin'izy ireo dia misy fitsosiky ny mpiandry ondry, antsoina hoe any an-toerana bordas, fa afaka manararaotra mijanona hisakafo ianao. Ary mbola misy fitsangantsanganana inona no azonao atao.
Ohatra, afaka mandeha mahafantatra ny Soritry ny lehilahy Neolithic ao Aguastuertas, 1600 metatra ny haavony. Tonga avy any amin'ny Selva de Oza miampita ny Lohasahan'i Guarrinza ianao ary hahita ny dolmen fa nandao azy ireo dimy arivo taona lasa izay. Soa ihany fa tsy io no fahasimbana megalithic manodidina eto, satria efa nahita 80 ny arkeology, maro ao amin'io faritra io ihany.
Na dia eo akaikin'ny tobin'i Ramiro el Monje aza ireo mpivarotra voalohany Misy hafa ao amin'ny satro-boninahitry ny maty, toerana avo kokoa, faribolana vato eo anelanelan'ny fito sy dimy arivo taona, ohatra. Misy efatra koa eo anelanelan'ny Casa de la Mina sy ny lohasaha El Barcal, 1200 metatra mahery ny halavany. Misy ihany koa ireo dongon-tany fandevenana, ny Camón de las Fitas, misy lalantsara. Toa majika izy ireo.
Araka ny hitanao, ny ala Oza dia manolotra zavatra isan-karazany sy mahaliana. ny trekking, Mazava ho azy fa ny filaharan'ny andro mba hahafahanao mamaky ny antso Làlan'i Camille, mitafy sary miavaka mahavariana sy fahitana ny tampon'ny tampon'isa ao amin'ilay faritra. Raha tena tianao ilay izy dia holazaiko aminao fa ny dia manontolo dia enina andro, mandalo amin'ny lafiny frantsay izy ary soa ihany fa manana fialofana hatrany.
Oh, ary aza adino ny tanàna azonao tsidihina alohan'ny hahatongavanao ao amin'ny Selva de Oza mety: Vita sy Siresa. Tonga any Vita amin'ny làlana A-176 izay mifanitsy amin'ny reniranon'i Aragón ianao. Toerana kely sy mahafinaritra izy io, misy arabe vato sy trano misy taila.
Tonga any Siresa ianao amin'ny fanarahana ny làlana mitovy ary ny tena zava-dehibe dia izany monasitera taloha izay lehibe tahaka ny an'ny Katedraly Jaca. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary ny fiangonany dia tsotra nefa tsara tarehy.
Mba hamaranana, raha tena miakatra lavitra noho ny mandeha ny zavatrao dia misy tranokala amin'ny teny espaniola miresaka manokana momba ireo dia ireo, ny via ferratas, karazana, ny haavon'ny fahasahiranan'izy ireo ara-teknika, ny fanjakana, ny karazana làlana ary ny hafa. Hamarino alohan'ny handehananao ho tonga vonona. Ary raha tsy eo anelanelan'ny tampon'ny tendrombohitra sy ny hazo fotsiny ny anao, eo ambanin'ny lanitra misokatra, irery, amin'ny mpivady na manan-janaka, dia aza mitsahatra mandeha amin'ny lalana mitovy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Selva de Oza, natiora ary fizahan-tany
Mampiavaka ny trano fandraisam-bahiny tsy manan-janaka